War० वारफेयर प्रार्थना पोइन्टस् विरुद्ध डेस्टिनी किलरहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स War० वारफेयर प्रार्थना पोइन्टिन्स किलर्सको बिरूद्ध
War० वारफेयर प्रार्थना पोइन्टिन्स किलर्सको बिरूद्ध
नोभेम्बर 24, 2018
भजन 62: 2
2 उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धार हुनुहुन्छ; उहाँ मेरो सुरक्षा हुनुहुन्छ; म अत्यन्तै उत्प्रेरित हुनेछैन।
भगवानको हरेक बच्चाको गौरवशाली गन्तव्य। भगवानको कुनै बच्चा जीवनमा औसत दर्ता सिर्जना गरिएको थिएन। तपाईं भाग्यको बच्चा हुनुहुन्छ, तपाईंको भविष्य उज्ज्वल छ, किनकि परमेश्वर आफैले त्यसो गर्नुभयो। हामीले बुझ्नु पर्छ कि शैतान मानिसजातिको आर्क शत्रु हो र उसले तपाईंको गन्तव्यलाई नष्ट गर्न यथाशक्य गर्छ। तपाईंको जीवनमा ईश्वरले तोक्नुभएको गन्तव्यको रूपमा भाग्य परिभाषित गर्न सकिन्छ। यर्मिया २ :29: ११ मा परमेश्वरले हामीलाई एक गौरवशाली र अपेक्षित अन्तको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तपाईंको गौरवशाली गन्तव्य तपाईले आफ्नो हातहरू बनाउनु भयो र केही पनि गर्नुहुन्न, तपाईले आफ्नो सपनालाई शारीरिक रूपले आत्मसात् गर्नु पर्छ र आध्यात्मिक रूपमा संलग्न भएर युद्ध प्रार्थना पोइन्टहरू। मैले नियति हत्याराहरूको बिरूद्ध 30० वटा युद्ध बिन्दु संकलित गरेको छु, यी नियति हत्यारहरु आध्यात्मिक र मानव अन्धकार हुन् जो शैतानले पठाएको हो तपाईको सपना साकार गर्नबाट रोक्न। तपाईंले प्रार्थनामा उनीहरूको प्रतिरोध गर्नै पर्छ।
जीवन एक युद्ध हो, तपाई जीवनमा सफल हुन विश्वासको लडाई लड्नु पर्छ। केहि पनि प्रार्थना ईसाई रोक्न सक्दैन। कुनै शैतान सफलतापूर्वक तपाईंको मार्गमा खडा हुन सक्दैन। तपाईं उठ्न र आफ्नो गौरवपूर्ण गन्तव्य को लागी लड्न पर्छ। तपाईंको भाग्य मानिसको हातमा छैन, यो पनि भगवानको हातमा छैन, यो तपाईंको हातमा छ। जब सम्म तपाईं कदम चाल्नुहुन्न, केहि पनि हुँदैन। भाग्य हत्याराहरु लाई जित्न तपाईले शारीरिक रुपमा उठ्नुपर्दछ र तपाईका सपनाहरु को लागी जानुपर्दछ, तपाईका उपहासकहरु द्वारा उत्प्रेरित नहुनुहोस्, बाइबलका नहेम्याहले जस्तो तपाईका सपनाहरुलाई कहिले पनि हार नमान्नुहोस्। भाग्य हत्यारहरूको बिरूद्ध यी युद्धक प्रार्थना पोइन्टहरु संलग्न गर्नुहोस् तिनीहरूलाई आध्यात्मिक र शारीरिक शान्त गर्न। खराबीबाट पराजित नहुनुहोस्, बरु असललाई खराबीलाई जित्नुहोस्, र जब तपाईं यो युद्ध प्रार्थनामा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईं भगवान्द्वारा राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। म देख्छु कि ईश्वरको नाममा तपाईका सबै मार्गहरूमा हत्या गरिएका सबै ईश्वरलाई अपमान गर्दै थिए।
१. हे भगवान, उठ्नुहोस् र येशूको नाममा मेरा सबै शत्रुहरू तितरबितर पार्नुहोस्
२. बुबा, म येशूका नाममा मेरो बाटोमा लागेका सबै भाग्य हत्याराहरूलाई पूर्ण अपमानको घोषणा गर्दछु
Against. मेरो नाममा निरुत्साहको कुनै पनि हतियार येशूको नाममा समृद्धि हुने छैन।
I. म येशूको नाममा मेरो गन्तव्यको बिरूद्ध बोल्ने हरेक जिब्रोको निन्दा गर्दछु
My. मेरो लाज खोज्ने सबैलाई येशूको नाममा सार्वजनिक सार्वजनिक लाजमा पर्न दिनुहोस्
My. मेरो पतनमा रमाउने सबैले येशूको नाममा शोकका साथ बप्तिस्मा लिन सकून्
My. मेरो नाम पछाडि सबै येशूको नाममा मेरो खातिर पट्टिनेछ
Your. तपाईंको सामर्थी हातले येशूको नाममा मेरो भाग्यका दुश्मनहरूका कणहरू तोड्न दिनुहोस्
Me। ममाथि आक्रमण गर्ने सबैलाई येशूको नाममा युद्धका दूतहरूले हमला गरोस्
१०. प्रत्येक मानिस जो मेरो जीवनमा ईश्वरको रूपमा उभिन्छ, येशूको नाममा विद्रोह गरोस्।
११. म आदेश दिन्छु कि म येशूको नाममा जीवनमा शीर्ष माग्छु
१२. म भन्छु कि येशूको नाममा कुनै जग्गा जित्न मलाई असाध्यै गाह्रो हुँदैन
१ dec. म आदेश दिन्छु कि मेरा शत्रुहरूले मेरो जीवनमा येशूको नाममा सेवा गर्नेछन्
१ I. म आदेश दिन्छु कि मेरो विरुद्धमा बनाइएको कुनै पनि हतियार र मेरो भाग्य येशूको नाममा समृद्धि हुनेछैन
१.. म भन्छु कि असफलताले मलाई येशूको नाममा रोक्न सक्दैन
१.. म आदेश दिन्छु कि म येशूको नाममा जीवनमा अवरोध हुन्छु
१.. म भन्छु कि म येशूको नाममा अयोग्य छु
१.. म भन्छु कि म येशूको नाममा असन्तुष्ट छु
१।। म आदेश दिन्छु कि मेरो नाममा मेरो जीवनको सबै दिनहरू सफलतापूर्वक मेरो विरुद्धमा कोही खडा हुन सक्दैन।
२०. म आदेश दिन्छु कि म प्रभुको नाममा मेरा शत्रुहरूको बीचमा शासन गर्नेछु।
२१. म यो घोषणा गर्दछु कि यूसुफको समयमा जस्तै मेरा सबै भाग्य-हत्याराहरू आउनेछन् र येशूको नाममा मलाई दण्डवत् गर्नेछन्।
२२. म येशूको नाममा मेरो सफलताको प्रतिरोध गर्ने हरेक ताकतको बिरूद्ध छु
२ Jesus. म येशूको नाममा मेरो जग देखि हरेक शैतानी बलवानको बिरूद्ध खडा छु
२ Jesus. म येशूको नाममा मेरो गन्तव्य बिरूद्ध लड्ने कुनै पनि फोहोर बानीलाई रोक्न म आदेश दिन्छु
२ myself. म येशूको रगतले आफूलाई भिजेको छु
२ Jesus. येशूको रगतले, म आफूलाई धोइन! F येशूको नाममा भएका सबै पुर्ख्यौली सम्बन्धहरूबाट शुद्ध
२ Jesus. येशूको रगतद्वारा, मैले येशूको नाममा मेरो गन्तव्यविरुद्ध प्रतिरोधको सबै शक्तिलाई जितें
२ Jesus. म येशूको नाममा पवित्र आत्माको साथ आफूलाई सुदृढ पार्छु
२।। म मेरो नामलाई पवित्र आत्माको साथ येशूको नाममा बलियो बनाउँछु
.०. म आदेश दिन्छु कि मेरो भविष्य येशूको नाममा उज्यालो छ।
अघिल्लो लेखमाIsc० प्रार्थना पोइन्ट्स गर्भपात विरुद्ध
अर्को लेखमा२० सफलता र समृद्धिको लागि प्रार्थना
सिरिल फोरे मार्च 16, 2019 12 मा: 32 बिहान
भगवान को मानिस कृपया मलाई प्रार्थनामा फिर्ता लिनुहोस्। कृपया मेरो लागि गन्तव्य हत्याराहरू, फाउन्डेसन समस्याहरू, सपना विनाशकहरू, मेरो परिवारमा कडा पुरुष र महिलाहरूको बिरूद्ध प्रार्थना गर्नुहोस्। भगवान तपाईलाई आशिष्‌ दिनुहुन्छ जस्तो गरी गर्नुहुन्छ।
पास्टर Ikechukwu Chinedum मार्च,, २०२० साँझ :16::2019
भगवान तपाइँलाई सिरिललाई आशीर्वाद दिनुहोस्, हामी सँधै हाम्रा पाठकहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौं। तपाईंको भाग्य र मूल समस्याहरूको हरेक दुश्मन अब वशमा छ !!! येशूको नाममा। आमेन
१० बाइबल पद तपाईंले निको पार्ने समयमा प्रार्थना गर्नै पर्छ
नयाँ शुरुवातहरूको बारेमा बाइबल पदहरू
जुन 25, 2020
आज १ नोभेम्बर २०१ Daily को लागि दैनिक बाइबल पढाइ
Impossible० असम्भव अवस्थाको लागि प्रार्थना पोइन्ट्स